उस्तै छ बेनाम नारीका दुःख | Sindhuli Saugat
उस्तै छ बेनाम नारीका दुःख
पत्रपत्रिकाबाट २०७५ फागुन २४ गते शुक्रवार काठमाडौं
इँटाभट्टाको गेटमै लेखिएको छ, ‘बाल श्रममुक्त छ।’ खेतमा लहरै सुकाइएका छन् काँचो इँटा। बन्दै गरेका इँटाका आकार असरल्ल छन्। छेउछाउमा मजदुर बस्न इँटाकै चाङ लगाएर बनाएका झ्यालीहरू (एककोठे छाप्रो) देखिन्छ।
छोराछोरीलाई स्कुल पठाउनुहुन्न ? फूलकुमारीले भनिन्, ‘गरिब काम गर्न जन्मिएका हुन् नि। कसले स्कुल पुर्‍याउनु ? को लिन जानु ? काम कसले गर्छ ? ’आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छ ।
पछिल्लाे - २०७५ फागुन २४ गते शुक्रबारको राशिफल
अघिल्लाे - मार्च ८ को सार्थकता